Wazi njani ukuba iselfowuni yam isimahla | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka emininzi, abaqhubi bezinikezele ekuxhaseni ixabiso leefowuni ukuze abasebenzisi bonwabele iifowuni eziphezulu, ngaphandle kokushiya izintso kwilinge. Ukuthintela abasebenzisi ukuba bangabhalisi kwaye baye kwenye inkampani, abaqhubi, bahlala bevimba izixhobo, ukutshixa okuhlala kuhlala iminyaka emibini.
Kodwa ukuba sifuna ukuthengisa i-terminal, kuba sidiniwe yile sinayo kwaye sifuna ukuyikhupha, okokuqala kufuneka siqiniseke ukuba i-terminal ayibonisi naluphi na uvalelo, oko kukuthi, ayibotshwanga nawuphi na umsebenzisi, kuba kungenjalo, imali esinokuyicela kwisiphelo iyahluka kakhulu. Apha siyakubonisa singazi njani ukuba iselfowuni yethu isimahla.
Namhlanje, uninzi lwabasebenzisi bayekile ukuxhasa iifowuni, ngakumbi iifowuni eziphezulu ezifana ne-iPhone kunye ne-Samsung, kuba bayasivumela ukuba sibabhatale ngezavenge zenyanga kwaye akukho meko abasebenza kuyo bavaliwe okanye babotshiwe. Ngale ndlela, ukuba ngaphambi kokuphelisa ukuhlala sifuna ukususa i-terminal, singayenza ngaphandle kwengxaki.
Kodwa ayingabo bonke abaqhubi abasinika iitheminali zasimahla ezivela kumzi-mveliso, kuba ibanga eliphakathi okanye iiterminal ezisezantsi zisanikwa inkxaso kwimeko ezininzi, oko kuthetha ukuba kungenzeka ukuba zibotshelelwe kumqhubi kangangeminyaka emibini ubuncinci, elona xesha lincinci lifunwa ngabasebenzisi ukugcina ukuzibophelela kwabo xa befumana iselfowuni simahla.
1 Ungazi njani ukuba iselfowuni yam isimahla
1.1 Iimpawu zeSamsung
1.2 Iiselfowuni zeSony
1.3 Izixhobo zeHuawei
1.4 Iimpawu ze LG
1.5 Ukufaka ikhadi leSIM lomnye umsebenzisi
1.6 Ukufowuna umsebenzisi
2 I-smartphone yethu isimahla ukuba nje ...
3 Isitshixo yi-IMEI yethu
3.1 Ukuvula i-smartphone yeOrange
3.2 Ukuvula iVodafone smartphone
3.3 Ukuvula iMovistar smartphone
Ukwazi ukuba iselfowuni yakho ikhululekile kumzi-mveliso okanye ibambelele kwisigxina somqhubi, yinto ebaluleke kakhulu Zombini xa uthenga i-terminal kwaye xa uyithengisa. Xa kuziwa ekuyithengiseni kubalulekile, kuba ixabiso layo liyahluka kakhulu ukuba ayinasiseko okanye ibotshelelwe kumqhubi. Kukwabalulekile xa uyithenga, kuba ukuba umthengisi uyayeka ukuhlawula iifizi ezihambelanayo, umqhubi unokuthintela ukusetyenziswa kwesiphelo sendlela nge-IMEI, eguqula isixhobo sethu esitsha kraca sibe sisiqwenga somzimba.
Isiphelo ngasinye sisinika uthotho lweekhowudi ezinokuthi xa sizifaka kwisiphelo sendlela zisivumele yazi kwangoko ukuba i-terminal yethu ibotshelelwe kumqhubi okanye hayi. Ngelishwa, ezi khowudi zahluke ngokupheleleyo phakathi kwabavelisi, ke apha ngezantsi sikubonisa iikhowudi, ngokomenzi wazo, esinokwazi ukuba isiphelo sethu simahla okanye sibotshelelwe kumqhubi.
Ikhowudi inkampani yaseKorea esivumela ngayo ukuba sazi ukuba i-terminal yethu isimahla okanye ibotshelelwe kumsebenzisi 7465625 #. Le khowudi kufuneka ifakwe kwisicelo sokufowuna. Ukuba umyalezo u-OFF uvela kwiscreen, ifowuni yethu isimahla. Ukuba, ngokuchaseneyo, umyalezo ON uyavela, oko kuthetha ukuba i-terminal yethu ibotshelelwe kumsebenzisi.
Isigebenga saseJapan sentengiso yefowuni, uSony, usivumela ukuba sazi ukuba ngaba i-smartphone yethu isimahla ngekhowudi ## 7378423 ## ikhowudi ekufuneka siyingenisile kwisicelo seminxeba yesiphelo.
Okulandelayo, imenyu iya kuboniswa ngeendlela ezahlukeneyo, ekufuneka sikhethe kuzo Ulwazi lweNkonzo ke ngoku uqwalaselo. Ngaphakathi kwimenyu yoqwalaselo, kufuneka sijonge imeko yokuPhumelela. Ukuba u-Ewe uyavela, i-smartphone yethu isimahla efektri, kodwa ukuba akukho kubonakala, isiphelo sethu sibotshelelwe kwifowuni ehambelana nayo.
Umenzi wesithathu othengisa ezona fowuni kwihlabathi liphela, iHuawei, usivumela ukuba sazi ukuba i-terminal yethu ivaliwe okanye ikhululekile ngokufaka le khowudi ilandelayo kwisicelo seminxeba: * # * # 2846579 # * # *. Imenyu iya kuvela, apho siza kucinezela Imenyu yeProjekthi> Umbuzo woLwazi lwenethiwekhi> Ulwazi lweSIM Lock.Ukuba, ngokuchaseneyo, SIMLOCK_DEACTIVE iyavela, kuya kuthetha ukuba isiphelo sethu seHuawei simahla.
Iimpawu ze LG
Enye i-chaebol I-Korea, i-LG, isivumela ukuba sazi ukuba i-smartphone yethu ivaliwe okanye hayi ngokufikelela kuseto lwetheminali. Ngaphakathi kuseto, siya Malunga nefowuni> Ulwazi lweSoftware. Ukuba ingxelo iphela nge NGEXESHA-XX kuthetha ukuba isiphelo sethu akukho mveliso kwaye khange igqithe kwizihluzi zomqhubi.
Ukufaka ikhadi leSIM lomnye umsebenzisi
Ukuba sinalo ikhadi lomnye umsebenzisi, elingeyonxalenye yomqhubi ofanayo, sinokukhawuleza sazi ukuba i-terminal yethu ivaliwe okanye ayihlawulelwa kwaphela. Ukuba ufaka, ukongeza kwi-PIN, usicela ikhowudi yokuvulaKuthetha ukuba itheminali yethu ibotshelelwe kumsebenzisi.
Ukuba ngokuchaseneyo, vele sibuze i-PIN kwaye xa uyilayita, itsala umqhubi wekhadi, oko kuthetha ukuba i-terminal yethu isimahla, ke sinokuqala ukuyisebenzisa nomnye umsebenzisi ngaphandle kokukhathazeka ngokuthintela.
Ukuba awufuni kubenza nzima ubomi bakho ngeekhowudi kunye neemenyu zoqwalaselo zeetheminali, olona khetho lukhawulezayo lokwazi ukuba ngaba i-smartphone yethu isimahla okanye ivaliwe ngumsebenzisi ngokunxibelelana nomsebenzisi. Siza kuphuma kumathandabuzo ngokukhawuleza kwaye baya kuthi basazise malunga nexesha lokusisigxina kwaye ngenxa yoko ukuvalwa kwesiphelo, emva koko sinako cela ukuba ikhululwe simahla.
I-smartphone yethu isimahla ukuba nje ...
Kude kube namhla, zonke iiterminal eziphezulu ezenziwa ukuba zifumaneke kuthi ngabalungiselela iinyanga ezingama-24 (ixesha eliqhelekileyo elinikezelwa ziinkampani ukuhlawulela i-smartphone) zisimahla, kuba kwiimeko ezininzi, ixabiso lokugqibela esihlawulelayo ngayo kuyafana nokuba siyithenge ngqo kwivenkile ebonakalayo okanye ekwi-intanethi simahla kumzi-mveliso.
Iya kuhlala isimahla ukuba nje ungayithengi kumnxeba, nokuba ngqo kumenzi, kwiAmazon, iEl Corte Ingles okanye nakwezinye iindawo ezizithengisayo. Kule meko, akukho mfuneko yokwenza naluphi na uhlobo lokujonga ukuba isimahla okanye hayi.
Isitshixo yi-IMEI yethu
I-IMEI yeefowuni eziphathwayo ifana nenombolo yobhaliso yeemoto okanye i-IP esiyisebenzisayo ukukhangela i-Intanethi. Nge-IMEI uyakwazi ngamaxesha onke, othenge i-terminal kunye nemeko yayo, itshixiwe okanye asimahla kumzi-mveliso. Ukuba i-terminal yethu ivaliwe kwaye kudlule ixesha elingangeenyanga ezingama-24 ukusukela oko sayithenga, elona nani kuphela elinomdla kumqhubi wokuvula i-terminal yethu yi-IMEI.
Ukwazi i-IMEI ye-smartphone yethu, kufuneka siye kwisicelo seefowuni kwaye ufake ikhowudi * # 06 #. Emva koko ikhowudi yamanani iya kuboniswa, ikhowudi ekufuneka siyinike umsebenzisi ukuba ayenze ukuvula ukuvula i-terminal. Umsebenzi ngamnye unenkqubo eyahlukileyo xa ekhupha i-terminal. Ukuba asinaso isiphelo sendlela, singalufumana olu lwazi kwibhokisi yezixhobo ngokuthe ngqo okanye nge-invoyisi yokuthenga yesiphelo.
Ukuvula i-smartphone yeOrange
Inkampani yaseFrance iyekile ukuvimba iitheminali ukusukela ngo-2014, ke ngoko, zonke iiterminal ezibeke kwimarike ngenkampani yazo zonke zikhululekile kwaye akukho mfuneko yokucela ukuvulwa. Ukuba unesiphelo esingaphezu kweminyaka emine, I-Orenji isinika iwebhusayithi apho sinako cela ikhowudi yokuvula Ukufaka i-IMEI yesiphelo kunye nemodeli efanayo (ulwazi olungafunekiyo kuba oku kuphakathi kwekhowudi ye-IMEI).
Ukuvula iVodafone smartphone
Ukukhupha i-terminal kwinkampani yaseBritane iVodafone, kufuneka singene ngqo kwisicelo esiphathwayo ngeWebhu oko kusinika ukufikelela kwiakhawunti yethu. Emva koko, cofa apha Lawula> Useto kunye nokongeza kwaye ukhethe ukuvula iselfowuni.
Skrolela esiphelweni sephepha de sifumane Unlock mobile ukhetho, apho kufuneka ngenisa inombolo ye-IMEI. Xa sele singene kuwo, kuya kufuneka silinde ubuninzi beeyure ezingama-48 ukufumana ikhowudi yokuvula, ikhowudi yokuvula ekufuneka siyingenisile xa ingacelwanga xa kufakwa ikhadi leSIM elivela komnye umsebenzisi.
Ukuvula iMovistar smartphone
IMovistar isivumela ukuba sicele ukuvulwa kwesiphelo ekufuneka sikwenzile Nxibelelana ne-1004 ukongeza ekusiboneleleni ngokhetho kwindawo yabathengi. Ukwenza oku, kufuneka sibe ne-IMEI yesiphelo esifuna ukuyivula. Le nkqubo iya kuthatha iiyure ezingama-48 ubuninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungazi njani ukuba iselfowuni yam isimahla